Madaxweynaha Somalia oo la kulmay raysal wasaaraha Sweden, isla markaana amaanay filimka laga sameeyay Soomaalida | Somaliska
Madaxweynaha Somalia Hasan Sh. Mohamud iyo raysal wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa markii ugu horeysay kulmay, iyagoo ka wada hadlay arimo badan oo ay ka midtahay taageerada dowlada Sweden ay siinayso dowlada Somalia, xaalada amaanka wadanka iyo doorashada Somalia ka dhici doonta. Kulanka ayaa ka dhacday magaalada Addis Ababa.
Intii uu labada hogaamiyaha u socday wada hadalka ayaa laysku soo qaaday in Sweden ay ku noolyihiin Soomaali badan isla markaana tiyaatarada Sweden dhawaan laga siidaayay filimka ay sameeyeen labada nin ee caanka ah ee Filip och Fredrik kaasoo loogu magacdaray “Trevligt Folk”. Madaxweyne Hasan Sh. ayaa sheegay in uu aad u xiisaynayo filimkaas oo uu jecelyahay in uu daawado.
Fredrik Wikingsson ayaa markii loo sheegay in uu amaanay madaxweynaha Somalia u sheegay Aftonbladet in uu aad ugu farxay warkaas isla markaana ay xitaa qorsheeyeen in ay filimka ku soo bandhigaan Muqdisho balse aysan u suurto galin. Waxa uu intaas ku daray in ay madaxweynaha Somalia u dirayaan cajalada filimka. Fredrik Wikingsson ayaa intaas ku daray in uu doonayo in filimkaan ay daawadaan dhamaan xildhibaanada baarlamaanka Sweden.
Warbixin ku saabsan shaqada safaarada Sweden ee Addis Ababa
Stockholm waa magaalada ugu fiican Iswiidhan